Cilmi baaris & Horumar |
Waqtiga boostada: 09-22-2020
Codsiyada biomediga ah ee haydarojiin ayaa si weyn looga filayaa akadeemiyada iyada oo ay ugu wacan tahay nabadgelyadeeda iyo waxtarkeeda ballaaran. Weli waxaa jira arrimo badan oo muhiim ah oo ku saabsan cilmiga biology hydrogen ee mudan in la barto. Waxaan aaminsanahay in cilmi baarista qotada dheer, dadku isku duubnaan doonaan ...Akhri wax dheeraad ah »
Kooxda AngelBiss sidoo kale waxay qorsheyneysaa inay ku sameyso hydrogen la xareeyay. Naqshadeynta waaxda R & D ee alaabta cusub: matoor Hydrogen. Haydarojiin waa nooc ka mid ah gaaska guban kara dareenka guud ee dadka. Sanadihii la soo dhaafay, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen saameyn antioxidant gaar ah oo dheeraad ah, iyo baaritaanka codsigeeda i ...Akhri wax dheeraad ah »
Kooxda AngelBiss sidoo kale waxay qorsheyneysaa inay ku sameyso nitrogen la xareeyay. Naqshadeynta waaxda R & D ee alaabta cusub: Generator-ka nitrogen. Nitrogen waa mid aan midab lahayn, aan sun lahayn, oo aan lahayn ur aan dabiici ahayn. Sidaa darteed, nitrogen waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa gaaska difaaca. Codsiga nitrogen sidoo kale waa mid ka mid ah R&D directi ...Akhri wax dheeraad ah »
Waaxda 'AngelBiss R & D' waxay hadda diiradda saareysaa soo saarista alaabooyin cusub, waxayna ku dadaaleysaa inay abuurto alaab khibrad sare leh iyo waxqabad wanaagsan. Mashiinka Nuugista La Qaadan Karo, AngelBiss oo hadda baranaya abuurka Dhalada Labaad, waxay noqon doontaa adeegsi ku habboon oo wax ku ool ah. Wixii AngelBiss 5L Oxy ...Akhri wax dheeraad ah »